यस्ता गुण भएका पुरुषसँग हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरू, तपाइको कस्तो छ गुण ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यस्ता गुण भएका पुरुषसँग हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरू, तपाइको कस्तो छ गुण !
पुरुषमा उनीह’रुले त्यस्ता धेरै गुणहरु खोज्छन् जसमा पुर्णता होस् । सबै महिलाहरुले आफूले चाहे जस्तै पुरुष नभेटे’पनि पुरुषमा यस्ता केहि गुण हुनै पर्छ जसले उनीहरुलाई आकर्षित गर्छ ।महिलाले पुरुषमा खोज्ने गुणहरु:) महिलालाई आदर गर्ने :हरेक महिलाहरु आफ्नो पुरुष साथी’ले उनीहरुलाई आदर र इज्जत गरोस् भन्ने चाह’न्छ । हेपेर बोल्ने कुरा का’ट्ने तथा महि’लाको इज्जत नगर्ने पुरुषहरुलाई उनीहरु मन पराउँदैनन् ।
मलेसिया मा हामी नेपाली च्याप्टर गठन अध्यक्षमा प्रकाश वाइबा